CEF (002) Uploaded by thangno at Your Listen
This music and or audio is not accessible due to copyright violations ."ယေရှုကျွန်ုပ်က� ..." has been removed due toacopyright notification. Keep exploring! You can find more similar and music and audio here - CEF (002)
Tags: cefsunday school songchurch school songgospel songmyanmar songsmyanmar gospel songmyanmar christianmyanmar christian songs
ယေရှုကျွန်ုပ်ကို ချစ်တော်မူ၏။ အားရပေ၏။ အားရပေ၏။ ယေရှုကျွန်ုပ်ကို ချစ်တော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်ကိုပင်ချစ်သည်။
ယေရှုကျွန်ုပ်အတွက် သေခံမူ၏။ ကားတိုင်ပေါ်တွင် ကားတိုင်ပေါ်တွင်။ ယေရှုကျွန်ုပ်တွက် သေခံမူပြီ။ ကျွန်ုပ်တွက်ပင် ခံပြီ။